Inona avy ireo paikady ambony ho an'ny sehatra SaaS hitombo | Martech Zone
Inona avy ireo paikady ambony indrindra tokony hitomboan'ny SaaS Platforms
Alarobia, Jolay 24, 2019 Alarobia, Jolay 24, 2019 Chloe Smith
Inona no ifantohanao voalohany amin'ny maha orinasa SaaS anao? Ny fitomboana, mazava ho azy. Ny fahombiazan'ny Skyrocketing dia andrasana aminao. Zava-dehibe amin'ny fahavelomanao maharitra:
Na dia mitombo 60% isan-taona aza ny orinasan-tsolika dia tsy tsara lavitra noho ny 50/50 ny fahafahany ho tonga goavambe an-tapitrisany dolara.
McKinsey & Company, Mitombo haingana na maty miadana
Ny fitomboana isam-bolana dia tena ilaina amin'ny fandrakofana ny fatiantoka avy amin'ny orinasa churn SaaS amin'ny ankapobeny. Mba handresena ny antenaina ary hitazomana anao ho maintso dia izao ny fotoana hamaritana ny paikadinao hitombo amin'ny taona 2019. Misy hatrany ny paikady vao misondrotra, ny tetika fanapahana ary ny fitaovana hanampiana anao hampitombo ny fitomboanao.
Paikady fitomboana SaaS
Ireto misy paikady vaovao vaovao entina hampiroboroboana ny fivoaran'ny rindrambaiko Software as a Service (SaaS).
Fifamoivoizana sy famoronana fahatsiarovan-tena
Mahazo ny atiny mety eo alohan'ny mpanatrika marina - Araka ny efa henonao dia mpanjaka ny atiny ary mbola misy foana, indrindra amin'ny SaaS. Manantena fampahalalana marobe ny mpampiasa amin'ny fanampiana azy ireo handray fanapahan-kevitra momba ny fividianana entana ary manantena ny manana marika avo lenta ny marikao. Ny fampivelarana ny atiny mety manintona sy mitazona ny mety ho mpanjifa mirotsaka dia zava-dehibe. Afaka mampiasa fitaovana toy ny ianaoSpyfu ary Google Planet Keyword Planner hamaritana hoe inona ny teny lakilenanao ambony, inona no tadiavin'ny mpihaino kendrenao. Paikady vitsivitsy no mizara ny atiny ho toy ny vahinin'ny mpitsidika amin'ny bilaogy hafa miaraka amin'ny mpihaino mitovy amin'izany, amin'ny fampiasana sehatra toa Medium ary ny famoahana, ary ny fampiasana doka ary ny fanamafisana hahazoana eo alohan'ny mpanatrika marina.
Mampiasa marika manokana - Tetikady fitomboana matetika tsy raharahina amin'ny fampiasana ny marika manokana an'ny mpanorina anao sy ireo manam-pahaizana ao amin'ny ekipanao mba hahatratra ny mpihaino tsara kokoa. Tian'ny olona ny mifanerasera sy mianatra amin'ny tena olona an-tserasera. Raha misy olona avy amin'ny ekipanao manana fahaiza-manao na fahaizana afaka manome fampahalalana mahasoa sasany dia fomba tsara hampiroboroboana ny marika tsy nahy sy tena izy io. Betsaka ny Mpanorina manoratra ao amin'ny Medium, Quora, ny sasany manana ny andian-dahatsoratra bilaogy na podcast izay manome fomba fijery marobe izay ho liana amin'ny mpihaino anao. Manangana fifampitokisana, fahatokisana ary fifandraisana manokana amin'ny marikao izany. Ny fizarana fotsiny izay fantatrao sy iainanao anananao dia afaka manampy anao hahatratra ara-organika sy hampiasanao ny olona kendrenao.
Manome fitaovana na loharano maimaimpoana - Tetikady fitomboana lehibe iray hafa ny fanomezana fitaovana na loharano maimaimpoana ao amin'ny tranonkalanao izay manintona ny mpanjifanao kendrena ary mamerina azy ireo hatrany ary manome fahefana ny marikao. Coschedule dia nahavita asa tena tsara tamin'ny famoronana aCoschedule Headline Analyzer izay mamela anao handinika lohateny iray amin'ny lahatsoratra bilaogy mivantana eo amin'ny tranonkalany. Ho takalony, mangataka ny mailakao izy ireo. Ny mpandinika lohateny dia misy dikany tonga lafatra ho an'ireo mpihaino kendreny. Azonao atao ny mamorona fitaovana toy izao ho an'ny mpihaino kendrena hampiasa azy io na afaka manao zavatra tsotsotra toy ny fanomezana torolàlana momba ny fomba fanaovana zavatra iray ianao amin'ny fifanakalozana ny mailaka.
Fitaovana fanatsarana doka - Betsaka ny fitaovana azonao ampiasaina izay hanampy anao hanatsara ny fomba famoronana sy fampisehoana doka. Afaka mampiasa ianao Adroll hamerenana ireo mpampiasa tonga any amin'ny tranokalanao efa ela taorian'ny nandaozany ny tranokalanao. Maherin'ny 90% amin'ireo mpampiasa tonga ao amin'ny tranokalanao no mety hiteny fa tsy hiverina intsony. Mikendry azy ireo amin'ny doka any an-toeran-kafa i Adroll miaraka amin'ny tolotra manokana momba ny fahalianan'izy ireo amin'ny tranokalanao. Raha nijery fonosana premium izy ireo dia hokendren'i Adroll amin'ny dokambarotra ho an'ny fihenam-bidy premium ary hamerina azy ireo. Indrindra ho an'ny zavatra toa an'i SaaS, mila fanapahan-kevitra kely kokoa vao tena handalo amin'ny fividianana. Ny ampahany lehibe amin'ny ezaka ataonao dia ny fitazonana ny lohalaharana ho an'ny sain'ilay mpanjifanao mety hitondra ny fitarihana hiverina.
Fiakarana an-tsambo sy fampihenana Churn
Hatsarao ny fandrosoanao an-tsambo miaraka amin'ny bara fandrosoana sy ireo singa ara-tsosialy - Ny ampahany lehibe amin'ny fitazonana ny fitomboana dia mampihena ny churn mandritra ny fisoratana anarana mpampiasa vaovao. Raha manao sonia mpampiasa ianao fa ny isan-jato be dia milatsaka amin'ny volana voalohany, tena tsy mitombo mihitsy ianao. Olana goavana amin'ny orinasa SaaS io. Mba hisorohana ny fikororohana dia alao antoka fa mahay tsara ny vokatrao hatramin'ny voalohany ny mpampiasa. Fomba iray tsara ahazoana antoka fa ny mpampiasa dia mandalo ny dingana azo atao rehetra amin'ny fizotranao anaty fiara ary mitazona azy ireo amin'ny "lesona" rehetra dia ny fampidirana lisitra na bara fandrosoana. Rehefa hitan'ny mpampiasa izany dia azo inoana fa handalo ny fizotrany rehetra izy ireo ary tsy hanadino fampahalalana manan-danja. Raha azonao atao, asio singa ara-tsosialy toy ny fanampiana namana na mpiara-miasa aminao. Arakaraka ny fifamatoran'ny fiaraha-monina no betsaka ny mpampiasa mety hiverina ary hanomboka hiara-hiasa miaraka amin'izay.Mianara bebe kokoa momba ny fanatsarana ny fizotranao anaty fiara.
Ampandraiso anjara vaovao ireo mpampiasa vaovao sy miverina - Te hitazona ireo mpampiasa sy mpampiasa mety ho eo amin'ny loop ianao amin'ny alàlan'ny fanambarana amin'ny fomba mahomby ireo fanavaozana anao sy ireo fiasa vaovao hanehoana ny ekipanao miasa mafy hanatsara ny vokatrao. Mampiorina ny fahatokisana ny marikao izany ary mitazona ny tsy fivadihan'ny mpampiasa rehefa mahita anao manome izay angatahiny izy ireo. Andramo i Beamer amin'ny tranokalanao na amin'ny app anao. Beamer dia changelog sy newsfeed izay hisokatra rehefa tsindrio ny mpampiasa ny takelaka "Inona no Vaovao" ao amin'ny fitetezana anao na kisary ao amin'ny fampiasa fampiharana anao. Misokatra miaraka amin'ny farany ny sidebar stream: misy fisehoan-javatra vaovao, fifanarahana, fanavaozana, vaovao, atiny sns. Toerana afovoany ahafahanao manavao ny rehetra izany. Azonao atao ny mampiasa fampandrenesana fanosehana hahatratra ireo mpampiasa ny tranokalanao na ny fampiharana anao ary hamerina azy ireo miaraka amin'ny fanavaozana manaitaitra. Izy io dia fomba tsara hanamafisana ny fifamatorana, hampihenana ny churn, ary hitazomana ireo mpanjifa mety "ho tonga sisiny" hiverina.
Fanehoan-kevitra sy varotra ho an'ny namana
Manangona hevitra - Ny famoronana vokatra SaaS mandresy dia dingan'ny fihainoana ny mpanjifa sy ny fampifanarahana. Ataovy azo atao ny manangona fanamarihana mahomby sy matetika amin'ny mpampiasa amin'ny dingana rehetra. Betsaka ny fitaovana afaka manampy anao handinika ny fanadihadiana sy ny naoty haingana ao amin'ny tranonkalanao sy ny app anao hanangonana valiny mora. Azonao atao ny mampiasa Beamer hanangonana valiny: afaka mamela ny fihetsik'izy ireo sy ny heviny ireo mpampiasa anao amin'ny fanavaozana farany anao ao anaty fahana mba hahafahanao mandrefy valiny. Ny fanangonana ny tamberina sy ny fampiharana azy amin'ny fanavaozana sy ny fiasa vaovao dia manome antoka fa mivoatra araka ny tokony ho izy ny vokatrao.
Manentana ny fizarana ny vokatrao - Mba hahatratrarana ny mpihaino kendrena toa ny mpanjifanao ankehitriny, ny fomba mora iray dia ny mandrisika sy mampamora azy ireo mizara ny vokatrao. Azonao atao ny mangataka amin'ny mpampiasa hanasa mpampiasa bebe kokoa ho takalon'ny zavatra iray. Tany am-piandohana dia nangataka anao ny Dropbox hizara ny rohin'izy ireo amin'ny olona 5 na 10 ary hahazo toerana fitahirizana fanampiny ao amin'ny Dropbox ho takalon'ny. Nahomby tokoa io. Ataovy mora ny fizarana ny vokatrao amin'ny media sosialy na amin'ny alàlan'ny mailaka. Betsaka ny mpampiasa no hanao izany indrindra raha toa ka entanina miaraka amina singa fanampiny (toerana fitahirizana Dropbox), andrana maharitra na fihenam-bidy.
Rafitra marketing amin'ny referral - Fomba tena mora hidirana eo imason'ny mpampiasa maro toa ny mpampiasa anao ankehitriny ny fampiasana ireo mpampiasa anao ankehitriny ho mpisolo vava ny marikao amin'ny alàlan'ny programa marketing referral. Misy fitaovana toaReferralCandy izay afaka manampy anao hametraka programa referral mora foana ho an'ny vokatrao ary ireo mpampiasa sy mpankafy anao ankehitriny dia manampy anao hivarotra nefa izy ireo koa mahazo tombony. Mahery ny porofo ara-tsosialy sy ny fijerin'ny namana; mandresy lahatra kokoa ny tenin'izy ireo noho ny anao! Azonao atao mihitsy aza ny manolotra ny hanome ny atiny sy ny mpiara-miasa aminao votoaty sy fitaovana hanampiana amin'ny fivarotana tsara kokoa ny vokatrao. Ny vintana dia tena tsara fa efa azon'izy ireo idirana amin'ny mpihaino kendrena. Hifandray amin'izy ireo amin'ny fomba tena izy sy marina kokoa izy ireo amin'izay azonao atao amin'ny doka.
Ny iray amin'ireto dia tena mora ampiharina vitsivitsy monja dia afaka manampy amin'ny fampivoarana haingana ny fitomboanao amin'ny taona 2019. Omeo tifitra izy ireo ary ahita azy ireo hifanaraka amin'ny mpihaino kendrenao sy ny tanjonao. Ho fanampin'izay, andramo i Beamer ho fomba tena mora entina hanamafisana ny fandraisana andraikitra eo amin'ny tranokalanao ary hifampiresahana tsara kokoa amin'ireo mety ampidirina sy mpanjifa ankehitriny.
Misoratra anarana amin'ny Beamer
Tags: fitaovana fanatsarana dokabeamerContent Marketingmpandinika lohateny coschedulemaimaimpoana maimaimpoanafitomboanaonboardingmampihena saas churnmarketing amin'ny referralsaassaas fahazoanafihazonana saasrindrambaiko ho serivisy
Chloe Smith dia consultant amin'ny orinasa ary mpanoratra tapa-potoana vonona foana hizara tidbits of torohevitra. Mino izy fa ny fientanam-po, ny herim-po ary, indrindra indrindra, ny fahalalana dia miteraka fahombiazana. Rehefa tsy miasa izy dia mety ho voahitsakitsaka amina boky tsara iray, ary eran'ny kaopy veromanitra (na mijery ny marina amin'ny fampisehoana malaza Netflix).
Antony 6 hamerenana amin'ny laoniny ny bilaoginao WordPress
Ahoana ny fampiasana ny Zoom H6 ho Audio Interface mankany amin'ny Mevo